1. သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့အတွက် ၇ရက်သားသမီး ဗေဒင်
2. အမရာ၊ ကိန္နရီ၊ မဒ္ဒီ၊ သမ္ဗူလ တို့လို တော်လေးဝဝင်ကြဖို့ဆိုရင်
3. သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့အတွက် ရာသီခွင်အလိုက်ဗေဒင်ဟောစာတမ်း
2. ဓာတ်ပုံများပေါက်ကြားပြီးနောက် G-Dragon မှာ ဂျပန်မင်းသမီးနှင့်တွဲနေသည်ဟူသော ကောလဟာလများ ထွက်ပေါ်
1. ပတ္တမြားမိုး နှင့် ရေအိုးစင် - အစ/အဆုံး
2. ယနေ့ခတ် အချစ်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ် - 1
3. စိတ္တဇ ရိုစီ - အစ/အဆုံး
MPT Myanmar National League 2018(Week-15) Fixture
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့.... GFA FC - စစ်ကိုင်းယူနိုက်တက်... ရခိုင်ယူနိုက်တက် - ဇွဲကပင်ယူနိုက်တက်.. မြ၀တီ - ဆောက်သမ်း... ရတနာပုံ-ရှမ်းယူနိုက်တက်.... ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်-ဧရာဝတီယူနိုက်တက်... ဟံသာဝတီယူနိုက်တက်-မကွေးအက်ဖ်စီ..... ပွဲတိုင်းက တကယ်ကို အကြိတ်အနယ်ရှိမယ့် ပွဲကောင်းတွေချည်းပဲနော်..။ လက်ရှိချန်ပီယံ ရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းက အဝေးကွင်းမှာ ရတနာပုံအသင်းနဲ့ ကစားရမှာဖြစ်သလို အဆင့် ၁ နေရာက ရန်ကုန်အသင်းက အောင်ဆန်းကွင်းမှာ ဧရာဝတီအသင်းကို ဧည့်ခံကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲ တန်းဆင်းဇုန် တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ GFA အသင်းနဲ့ စစ်ကိုင်းယူနိုက်တက်အသင်းတို့ရဲ့ ပွဲစဉ်ကလဲ တကယ်ကို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ပွဲစဉ်ပါပဲ...။
Hantharwady 9-0 Myawady (Week-14)
MPT Myanmar National League 2017 Week-14 Hantharwady 9-0 Myawady
Southern Myanmar 3-1 Zwekapin Utd (Week-14)
MPT Myanmar National League 2018 ----------------------------------------------------------- Week-14 Southern Myanmar 3-1 Zwekapin Utd
Sagaing Utd 0-2 Shan Utd (Week-14)
MPT Myanmar National League 2018 Sagaing Utd 0-2 Shan Utd
အဆင့် ၈ နေရာက ဆောက်သမ်းအသင်းနဲ့ အဆင့် ၇ နေရာက ဇွဲကပင်အသင်းတို့ရဲ့ တွေ့ဆုံမှုပါ။
အဆင့် ၈ နေရာက ဆောက်သမ်းအသင်းနဲ့ အဆင့် ၇ နေရာက ဇွဲကပင်အသင်းတို့ရဲ့ တွေ့ဆုံမှုပါ။ အိမ်ကွင်းမာတဲ့ ဆောက်သမ်းအသင်းက ဒီပွဲမှာ ပွဲပယ် ကစားသမား မရှိပေမယ့် ဇွဲကပင်အသင်းမှာတော့ အားထားရတဲ့ တိုက်စစ်မှူး သန်းထက်အောင်နဲ့ နောက်ခံလူ ဝက်စ်တို့ ပွဲပယ်ကြောင့် မပါနိုင်ပါဘူး။ ဒီအခွင့်အရေးကို အိမ်ရှင်တို့ အသုံးချနိုင်မလား..ဇွဲကပင် ကပဲ ရလဒ်ကောင်းရယူသွားမလား.. ဇွန် ၃ ရက်၊ ညနေ ၃:၃၀ မော်လမြိုင်ကွင်းမှာ ကစားမယ့် ဒီပွဲအပေါ် အစီစဉ်တင်ဆက်သူ သောကြာ နဲ့ အားကစား သတင်းထောက် စည်သူတို့က ပွဲကြို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ပေး ထားပါတယ်။
Yadanarbon Vs Myawady
အမှတ်ပေးဇယား ထိပ်က အသင်းတွေနဲ့ အမှတ်ပြတ်နေတဲ့ ရတနာပုံအသင်းအနေနဲ့ ဒုတိယအကျော့မှာ အမှတ်ကွာဟချက် ကျဉ်းမြောင်းအောင် လုပ်ဖို့ လိုနေပါပြီ။ မြ၀တီအသင်းက ပထမအကျော့မှာ ရတနာပုံအသင်းဆီက သရေတစ်မှတ်ယူထားနိုင် တဲ့ အသင်းပါ။ အိမ်ရှင်ရတနာပုံအသင်းအနေနဲ့ ဒုတိယအကျော့ အိမ်ကွင်းပွဲဦးထွက် ပွဲစဉ်မှာ အောင်ပွဲခံနိုင်မလား...မြ၀တီအသင်းကပဲ အခက်တွေ့အောင် ကစားပြီး အမှတ်ခွဲယူ သွားနိုင်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ချင်စရာပါပဲ။
Yadanarbon 7-0 Myawady Highlight Video
MPT Myanmar National League 2018------------------------------------------------------------ (Week-12)Yadanarbon 7-0 Myawady
Sagaing Utd 1-1 Magwe FC Highlight Video
MPT Myanmar National League 2018------------------------------------------------------------ (Week-12)Sagaing Utd 1-1 Magwe FC
Rakhine Vs Southern
အဆင့် ၈ နေရာက ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ အဆင့် ၉ နေရာက ဆောက်သမ်းအသင်းတို့ရဲ့ တွေ့ဆုံမှုပါ။ ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းက နောက်ဆုံး အိမ်ကွင်းပွဲမှာ မကွေးအသင်းကို ဂိုးပြတ် ရှုံးထားလို့ ဆောက်သမ်းနဲ့ပွဲမှာ အမှားမခံဘဲ အမှတ်ရအောင် ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပဲ ဆောက်သမ်းအသင်းကလဲ နောက်ဆုံးပွဲမှာ ရန်ကုန်အသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာ ဂိုးပြတ် ရှုံးထားလို့ ဒုတိယအကျော့ ပွဲဦးထွက်မှာ အမှတ်နဲ့ စတင်တာထွက်နိုင်အောင် ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအကျော့ရဲ့ ပထမဆုံးပွဲဦးထွက်ပွဲစဉ်မှာ အနိုင်သုံးမှတ် ယူသွားမှာက အိမ်ရှင်ရခိုင် ယူနိုက်တက်အသင်းလား...ဧည့်သည်ဆောက်သမ်းအသင်းလား...